Skype ရှိမြှားကဘာကိုဆိုလိုသနည်း။ - Skype
အဓိက > Skype > Skype သင်္ကေတဆိုသည်မှာအဆုံးစွန်လမ်းညွှန်ဖြစ်သည်
၃၂ သင်၏ကီးဘုတ်ပေါ်တွင်လျှို့ဝှက်ပေါင်းစပ်မှုများသင်၏ကွန်ပျူတာထဲတွင်လျှို့ဝှက်ချက်များမည်မျှရှိသည်ကိုစဉ်းစားဖူးပါသလား။ မကြာသေးမီကလွန်ခဲ့သောအနှစ် ၂၀ ကကဲ့သို့အဆင့်မြင့်ကွန်ပျူတာများသည် hard drive စွမ်းရည် 320 megabytes ရှိပြီး၎င်းကိုထိုအချိန်ကပီစီနည်းပညာတွင်အဓိကအောင်မြင်မှုများအဖြစ်သတ်မှတ်ခဲ့ကြသည်။ ထိုအချိန်မှစ၍ များစွာပြောင်းလဲသွားခဲ့သည်။ ကြွက်တွေကိုမသုံးရသေးဘူး၊ touchpads တွေနဲ့ touchscreens တွေကိုပိုကြိုက်တယ်။
ဒါပေမယ့်ကီးဘုတ်တစ်ခုတည်းကမပြောင်းလဲပုံရတယ်။ ဤနေရာတွင်သေချာပေါက်အသုံးဝင်မည့် hotkey ပေါင်းစပ်မှုအားလုံး၏စာရင်းဖြစ်သည်။ သင် Windows သို့မဟုတ် OS X အသုံးပြုသူဟုတ်မဟုတ်ဆိုတာအရေးမကြီးပါဘူး။
၀ င်းဒိုးကီးဘုတ်နဲ့လျှို့ဝှက်ပေါင်းစပ်မှု ၂၃ ခုနဲ့စကြရအောင်။ ပထမဆုံး Windows key ကိုရှာပါ။ ၎င်းသည်ပုံမှန်အားဖြင့်ကီးဘုတ်၏အောက်ခြေတွင်ရှိသည်။
spacebar ရဲ့ဘယ်ဘက်။ တွေ့ပြီ? ကောင်းတယ် ဤခလုတ်ကိုအောက်ပါပေါင်းစပ်မှုအားလုံးတွင်အသုံးပြုသည်။
ဒါကြောင့်ကိုယ့်ပေါ်မှာလက်ညှိုးကိုကိုင်ထားပါ။ ကောင်းပြီသွားကြကုန်အံ့။ Combination # 1 Win key ကိုနှိပ်ရုံဖြင့် Start menu ပေါ်လာမည်။
Windows 8.1 တွင်ယခင် ၀ င်းဒိုးကိုဖွင့်လိမ့်မည်။ ပေါင်းစပ်မှု # ၂ ကို Win နှိပ်ပြီးနောက် A. ကိုနှိပ်ပါ။
Windows 10 မှာ Action Center ပွင့်လာလိမ့်မယ်။ Action Center ကသင့်ကွန်ပျူတာ settings ကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန် access လုပ်သည်။ လွယ်ပါတယ်! Combination #3Win key နှင့် B key တို့ပေါင်းစပ်ခြင်းသည်သတိပေးချက်areaရိယာတွင်ပထမဆုံးသင်္ကေတကိုရွေးချယ်သည်။
ထို့နောက်သင်္ကေတများကြားရှိမြားခလုတ်များနှင့်ပြောင်းနိုင်သည်။ ပေါင်းစပ်မှု #4ဝင်းသော့နှင့် Ctrl သော့နောက်တွင်ခ။ ဤပေါင်းစပ်မှုသည်အသိပေးချက်forwardရိယာတွင် forward message ပြသသည့်ပရိုဂရမ်သို့ပြောင်းလဲသွားသည်။ ပေါင်းစပ်ခြင်း ၅ ။ Win key နှင့် C keys ကိုနှိပ်ပါ။
Windows 8 နှင့် 8.1 တွင် Charm Bar ကိုဖော်ပြသည်။ Cortana ကို Windows 10 မှာဖွင့်လှစ်ပေမယ့်သင်တစ်ဦးကိုထောက်ပံ့ဘာသာစကားအသုံးပြုနေမှသာလြှငျ။
အင်္ဂလိပ်အတွက်ကောင်းပါတယ်။ ပေါင်းစပ်မှု # ၆ အကယ်၍ သင်ဖွင့်ထားသော ၀ င်းဒိုးအားလုံးကိုချက်ချင်းလျှော့ချလိုလျှင်အကျိုးရှိသည်။ Win key ကိုနှိပ်ပြီး D ခလုတ်နှိပ်လိုက်ပါ။ ပြီးရင် desktop ကို split split ဖြင့်မြင်ရပါလိမ့်မယ်။
Combination #7သည် Windows Explorer ကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန် access လုပ်သည်။ Win key နှင့် E key ကိုအတူတကွနှိပ်နေသူများအတွက် Windows 10 သည် Quick Launch bar ကိုပုံမှန်အားဖြင့်ဖွင့်သည်။ Win key နှင့် F ခလုတ်ကိုပေါင်းစပ်ထားသောနံပါတ် ၈ သည် Find files and folders ကိုဖွင့်သည်။
Windows 10 တွင် Feedback Hub ကိုဖွင့်သည်။ ပေါင်းစပ်မှု # ၉ သော့သုံးခု - Win key + Ctrl + F ကိုဖွင့်ပြီး 'Find Computer' ကိုဖွင့်ပါ။ ပေါင်းစပ်မှု # 10 Win key နှင့် G key ကွဲပြားခြားနားသော Windows ဗားရှင်းများတွင်ကွဲပြားခြားနားစွာအလုပ်လုပ်သည်။ Windows7နှင့် Vista တို့တွင်လက်ရှိလုပ်ဆောင်နေသော gadget များအားလုံးကိုရှေ့တန်းတင်ထားသည်။ Windows 10 တွင်ဂိမ်းဘားကိုဖွင့်လိမ့်မည်။
ကစားချင်ပါသလား။ အခုသင်မြန်မြန်ဆန်ဆန်ဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာသိပြီ။ ပေါင်းစပ်မှု ၁၁။ Win နှင့် K ခလုတ်များကိုနှိပ်ပါ။ Windows 8 နှင့် 8.1 ရှိ New Start Menu ပေါ်လာလိမ့်မည်။ အကယ်၍ သင်သည်အသုံးပြုသူကိုပြောင်းလဲလိုလျှင်သို့မဟုတ် workstation ကိုလျင်မြန်စွာသော့ခတ်လိုလျှင် # 12 ပေါင်းစပ်မှုကိုအသုံးပြုပါ။
Win key ကိုနှိပ်ပြီး L (Love) နောက်မှလုပ်လိုက်လျှင်သင်လုပ်နိုင်လိမ့်မည်။ သင်ကြိုက်နှစ်သက်သည်မဟုတ်ချေသင်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းအသုံးပြုမည့်နောက်ထပ် hotkey ပေါင်းစပ်မှု။ ပေါင်းစပ်မှု ၁၃။ ၀ င်းဒိုးနှင့် M သော့များသည် windows အားလုံးအားလျော့ချနိုင်သည်။ ပေါင်းစပ်ခြင်းနံပါတ် ၁၄ သည်နောက်ဆုံးအနိမ့်ဆုံးအနိုင်ရရှိမှုကိုပြန်လည်အထောက်အကူပြုလိမ့်မည်။ ဤကီး ၃ ခုကိုသာနှိပ်ပါ။ Win၊ Shift နှင့် M - သင်ဒီမှာပါ။
Win နှင့် O သော့၏ပေါင်းစပ်မှု # ၁၅ သည်သင်၏စက်၏လမ်းကြောင်းကိုသော့ခတ်ပြီးတက်ဘ်ပေါ်ရှိ gyroscope function ကိုပိတ်ထားသည်။ ပေါင်းစပ်မှု # ၁၆။ ပြင်ပမော်နီတာသို့မဟုတ်ပရိုဂျက်တာကိုသင်အသုံးပြုနေပါသလား။ ထို့နောက် Win ခလုတ်ကို နှိပ်၍ ၎င်းသည် P key ကိုနှိပ်ပြီး၎င်းသည် operating mode များကိုပြောင်းလဲလိမ့်မည်။
၎င်းသည် Windows7နှင့်အသစ်များအတွက်သာအလုပ်လုပ်သည်။ နောက်တစ်ခုကဘာလဲ? မင်းရဲ့ကွန်ပျူတာထဲမှာတစ်ခုခုရှာနေသလား။ ထို့နောက် Win နှင့် Q ၏သော့ချက်နံပါတ် ၁၇ ကိုအသုံးပြုပါ။ ၎င်းသည် Windows 8 နှင့်အသစ်များရှိတပ်ဆင်ထားသည့်အက်ပလီကေးရှင်းအားလုံးအတွက်ရှာဖွေခြင်းစာလုံးပေါင်းကိုဖွင့်ပေးသည်။
Combination # 18 သည် Run အတွက် dialog box ကိုဖွင့်သည်။ Win key နှင့် R key ကိုနှိပ်ပြီးသင် run ချင်သောပရိုဂရမ်တစ်ခုသို့မဟုတ် application ကိုရွေးချယ်ပါ။ ပေါင်းစပ်ခြင်း # 19 သော့များ - Win နှင့် T သည် focus ကို system tray သို့ပြောင်းလိုက်သည်။
၎င်းသည် Windows7နှင့်အသစ်များတွင်သာအလုပ်လုပ်သည်။ U သည် Utility ကိုဆိုလိုသည်။ ထို့ကြောင့် Win နှင့် U သော့၏နံပါတ် ၂၀ သည်သင်တို့အတွက် Utility Manager ကိုဖွင့်သည်။ မှတ်စုများသို့မဟုတ်ဖန်သားပြင်များနှင့်သင်အလုပ်လုပ်ရန်လိုအပ်ပါသလား။ Win key နဲ့ W ကိုနှိပ်ပြီး Windows Ink W orkspace ကိုဖွင့်လိုက်ပါ။
အရမ်းအဆင်ပြေ! ပေါင်းစပ်မှု # 22 Win key ကိုနောက်တွင် X နောက်မှ Windows Mobile Application Center ကိုဖွင့်သည်။ ၎င်းသည် Windows Vista နှင့်7ရှိမိုဘိုင်းကွန်ပျူတာများအတွက်သာဖြစ်သည်။ နောက်ဆုံး Windows အတွက် Windows ပေါင်းစပ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ Win နှင့် Y key သည် Yahoo! ကိုစတင်လိမ့်မည်။ တပ်ဆင်ထားရင်သင့်အတွက် Messenger ။
Woohoo! Windows keyboard နဲ့လုပ်ပြီးပြီ။ Mac အသုံးပြုသူများ၊ ခင်ဗျားတို့ရှိနေသေးလား။ ယခုသင်သည်သင်၏အလှည့်ဖြစ်သည်။ ဒီနေရာတွင်သင်ချစ်ကြလိမ့်မည်အစွမ်းထက်ပေါင်းစပ်ကိုးရှိပါတယ်! စလိုက်ကြစို့! ဝက်ဘ်ဆိုက်များကိုကြည့်ရှုခြင်း။ Command key ကိုအပေါ်သို့မြှားဖြင့် နှိပ်၍ ၎င်းသည်မည်သည့် webpage ၏အစကိုမဆို scroll လုပ်လိမ့်မည်။ •သို့သော်သင်ကအောက်သို့ဆင်းလိုပါက command key ကို နှိပ်၍ အောက်ပါမြှားနောက်သို့လိုက်ကာဝဘ်စာမျက်နှာ၏အောက်ခြေတွင်ရှိနေလိမ့်မည်။ •ပေါင်းစပ် ၃ သည်စာလုံးပေါင်းအမှားများကိုဖွင့်ရန်မည်သည့်စာရွက်စာတမ်းတွင်မဆို scroll လုပ်ရန်ကူညီလိမ့်မည်။
command နှင့် semicolon ကိုနှိပ်ပါ။ သွားကြကုန်အံ့! ၁၊ ၂ သို့မဟုတ် ၃ နောက်တွင်ပါသော Command ခလုတ်သည်သင့်ဘရောက်ဇာတွင်ရှိသည့်ဖွင့်ထားသည့် tabs များအားလုံးကိုအဆင်ပြေစေသည်။ Command plus 1 ကသင့်ကိုပထမဆုံး tab ကိုခေါ်သွားတယ်။ Command plus2ကမင်းကိုဒုတိယကိုခေါ်သွားမှာပါ။
ရိုးရိုးလေးလား။ Keyboard shortcut No.5Option and Delete ဒီအဆင်ပြေတဲ့ keyboard shortcut ကစာကိုတစ်ချိန်တည်းမဟုတ်ဘဲတစ်ကြိမ်မှာစကားလုံးတစ်လုံးတည်းဖျက်ပစ်တယ်။ သင်သည် TextEdit ကိုရိုက်နေစဉ်သို့မဟုတ်သင်၏ browser ဘရောက်ဇာ၏ URL bar တွင်ဝက်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုရိုက်ထည့်ခြင်းစသည်တို့အားလုံးသည် OS X တွင်အလုပ်လုပ်သည်။ •ပေါင်းစပ်ထားသောနံပါတ် ၆ ဖွင့်ထားသော ၀ င်းဒိုးအားလုံးကိုလက်ရှိတက်ကြွသောအက်ပ်မှအမြန်ဖုံးကွယ်ချင်ပါသလား။ Command key ကိုနှိပ်ပြီး H. ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။ • Combination #7သည် window တစ်ခုကိုမတော်တဆပိတ်မိလျှင် URL ကိုမမှတ်မိလျှင်အသက်ကယ်သမားဖြစ်သည်။
Command, Shift နှင့် T ခလုတ်ကိုအတူတကွနှိပ်လိုက်ပါ၊ ပြီးရင်သင့် browser မှာရှိတဲ့နောက်ဆုံးပိတ် tab ကချက်ချင်းပွင့်လာလိမ့်မည်။ • Combination # 8 of Command နှင့် F3 သော့များပေါင်းစပ်ခြင်းအားဖြင့် app windows windows အားလုံးကိုမြင်ကွင်းမှဖယ်ရှားပြီးသင်၏ desktop ပေါ်တွင်ကြည့်ရှုနိုင်သည်။ သင်၏အက်ပ်များကိုထပ်မံပြသရန်ခလုပ်များကိုထပ်နှိပ်ပါ။
နံပါတ် (၉) တွဲပေါင်းစပ်မှုပေါင်း Shift plus Volume Up (သို့) ပေါင်းစပ်မှုဟာအထူးသဖြင့်သင့်ရဲ့အသံထုတ်လွှတ်မှုအဆင့်ကိုနည်းနည်းလေးသေးငယ်တဲ့အဆင့်တွေပေါ်မှာဖြောင့်အောင်၊ ဤဆောင်းပါးကိုသင်၏သူငယ်ချင်းများနှင့်မျှဝေရန်မမေ့ပါနှင့် - သူတို့လည်းသိရန်လိုအပ်သည်! အောက်ပါ 'Like' ခလုတ်ကိုနှိပ်ပြီးဘဝ၏တောက်ပသောဘ ၀ တွင်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်ပူးပေါင်းရန် 'Subscribe' ကိုနှိပ်ပါ။
ဒီမှာခရမ်းရောင်စက်ဝိုင်းပုံဥပမာပါရှိသည်- ဘလော့ဂ်အိုင်ကွန်: ဒီဘေးကခရမ်းရောင်အစက်လိုပဲဆိုလိုသည်သူကလူရှိပါတယ်Out Of Office အင်္ဂါရပ်ကိုသက်ဝင်။ ဒါဟာအစဆိုလိုသည်သူကလူဟုတ်တယ်အော့ဖ်လိုင်း, ဒါကြောင့်အားလုံးဖြစ်နိုင်ခြေအတွက်သူတို့ဖြစ်ကြသည်တကယ်ရုံးထဲက။Sep 13 2016
အားလုံးမင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်မကြာသေးမီကအွန်လိုင်းလိမ်လည်မှုအကြောင်းအများကြီးပြောခဲ့ပြီးပါပြီ။ ငါမကြာသေးမီကအချစ်ဇာတ်လမ်းကိုလှည့်စားခြင်းအကြောင်းပြောနေတာပါ၊ အကြောင်းကတော့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကတော့မင်းသိပြီးသားငါ့ဓာတ်ပုံတွေဟာချစ်ခြင်းမေတ္တာအတုအယောင်အမျိုးသမီးတွေရဲ့လိမ်လည်လှည့်ဖြားမှုမှာအသုံးပြုခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီး၊ အဲဒီမှာပိုက်ဆံအများကြီး။ ကျူးလွန်ခံရသူများထံမှကျွန်ုပ်ကြားသိရသည်မှာသူတို့သည်ကျွန်ုပ်၏ဓာတ်ပုံများကိုအသုံးပြုကြသည့်အခါ၎င်းတို့သည်အလွန်ယုံကြည်မှုရှိပြီး၎င်းတို့သည်ကျွန်ုပ်ကို Skype မှဆောင်းပါးတွင်တွေ့သောအခါ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်နှင့်စကားမပြောသောကြောင့်ခဏခဏရှုပ်ထွေးသွားခြင်းဖြစ်သည်။ တကယ်လို့ငါ့ကိုဆောင်းပါးတွေယူပြီးအင်တာနက်ပေါ်မှာ Skype သုံးပြီးရှာဖွေမယ်ဆိုရင်ငါဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာအတိအကျတွက်ချင်တယ်။ ဒါကြောင့်ဒီနေ့ငါအနည်းငယ်သုတေသနပြုလုပ်ခဲ့တယ်။ ဒီနေ့ဟာ manycam andman ycam လို့ခေါ်တဲ့အရာတစ်ခုပါ။ တကယ်တော့ဒီဟာတွေမှာတကယ်ကောင်းတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေအများကြီးရှိတယ်၊ သင်ကြားရေးအတွက်ပါ။ ဒါပေမယ့်ဒါကဒီအလိမ်အညာတွေကိုအလွယ်တကူသုံးနိုင်တဲ့ကိရိယာတွေထဲကတစ်ခုပါ၊ သင့်ကိုစာတတ်မြောက်မှုအနည်းငယ်ပေးဖို့အကြံဥာဏ်ပေးရန်ဤကဲ့သို့သောအရာတစ်ခုကိုပြုလုပ်ရန်သားကောင်များမှကြားခဲ့ရသည်။ ယခုအချိန်တွင်ဤကဲ့သို့သောအရာတစ်ခုခုကိုသင်မည်သို့သိရှိကြောင်းနှင့်ဤဆောင်းပါးကိုပထမဆုံးဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ကိုရှာဖွေပြီး၎င်းအားလုံးရှိပါကဤကိရိယာကိုအသုံးပြုနိုင်သည်။ အွန်လိုင်းငါ့ကို၏ကွဲပြားခြားနားသောဆောင်းပါးအမြိုးမြိုး, အထူးသဖြင့်ဒီအပေါ် ဤသည်သည်အထူးသဖြင့်ဤကိစ္စတွင်ပါ ၀ င်သော UTI တစ်မျိုးမျိုးဖြစ်နိုင်သည်။
အကယ်၍ သင်သည်ဤဆောင်းပါးကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲရန်အမှန်တကယ်ဆောင်းပါးကိုကြည့်နေပါကအင်တာနက်မှဆောင်းပါးများကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်သင်အသုံးချနိုင်သောကိရိယာများစွာရှိသည်ဆိုပါက၊ ကျွန်ုပ်သည်ဖန်သားပြင်ပေါ်တွင်အမှန်အတိုင်းပြောနေသည်သို့မဟုတ်မရင်းနှီးသောပရိသတ်ကိုပြောနေခြင်းဖြစ်သည်၊ ထို့ကြောင့် Keepvid သည်လူကြိုက်များသည်။ ကျွန်ုပ်သည် clip converter ကိုအသုံးပြုပြီးသင့်ကို set up ပြုလုပ်သည့်အခါ၎င်းကို web ite မှမှန်ကန်စွာလုပ်နိုင်သည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်သည်၎င်းကို chrome extension အဖြစ်အသုံးပြုသည်။ ထို့ကြောင့်သင်ဝက်ဘ်ပေါ်တွင်သင်ကြည့်နေသောမည်သည့်ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်မဆိုဆောင်းပါးများကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်နိုင်သည်။ Desktop နှင့်ယခုအလွန်လွယ်ကူလာပြီဖြစ်သည်။ ယခုအခါကျွန်ုပ်သည်အရင်းအမြစ်အမျိုးမျိုးကိုကင်မရာများစွာထဲသို့ကူးယူပြီးဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းသည်ကင်မရာများစွာဖြစ်နိုင်သည်။ ထို့အပြင်မီဒီယာကလစ်များလည်းဤတွင်မီဒီယာဖိုင်များတွင်တပ်ဆင်ထားပြီးဖြစ်သည်။ Desktop ဆိုတာဒီမှာလွယ်အောင်လုပ်ဖို့ပါ။ အခြေခံအားဖြင့်အဲဒါကို set up လုပ်ထားတယ်။ တကယ်လို့ဒီလိုလုပ်ချင်ရင် Skype, google hangouts ဒါမှမဟုတ် Call up လိုတစ်ခုခုလုပ်ရမှာကငါရှိရာငါ့ Skype settings ကိုသွားရတော့မယ်။ ငါ Mac ကိုသုံးတယ်၊ PC မှာအနည်းငယ်ကွဲပြားမှုရှိမယ်၊ Audio-Video ကိုသွားပါ။ ပြီးတော့ကင်မရာကိုပြောင်းလို့ရမယ်၊ Manycam ကိုသင်၏ကင်မရာ Ameraso အဖြစ်ရွေးချယ်နိုင်သည်။ သင်၏ logitechnical ကင်မရာမှပြန်နိုင်သည် ကျွန်မအခုသုံးပြီးတယ်တ, ဒါမှမဟုတ်ငါ့အကို virtual က c မှ amera ကင်မရာအများကြီးနှင့်အတူငါ Skype ကိုငါဖြစ်၏နေစဉ်ငါဒီမှာလုပ်ဖို့ရှိသည်သမျှ, ရုပ်ရှင်အရင်းအမြစ်အဲဒီမှာဖြစ်ပြီး, သင်ဆောင်းပါးအလွန်လျှင်မြန်စွာတွေ့နိုင်ပါသည်။ ငါဆောင်းပါးစကားပြောနေတာကြောင့်အခုတော့ရွေ့လျားနေတယ်မဟုတ်ပေမယ့်မင်းဒါကိုဘယ်လိုလုပ်နိုင်မလဲဆိုတာကိုခံစားရနိုင်တယ်။ ဒါပေမယ့်သင်အဲဒီလိုလုပ်တဲ့အခါမှာသင်ဟာသိပ်ကိုယုံကြည်စိတ်ချနိုင်ပါတယ်၊ ဒါပေမယ့်သင်သိပါတယ်။ ခင်ဗျားပြောနိုင်တာပေါ့၊ ဆောင်းပါးတခုခုမှာတွေ့ခဲ့ဖူးတာကိုခင်ဗျားသိတာပေါ့၊ ဒီဟာကဒီပုဂ္ဂိုလ်ပဲ၊ ဒါပေမယ့်ဒီဂျစ်တယ်နည်းနဲ့လှည့်စားနည်းတွေအများကြီးရှိတယ်လို့ခင်ဗျားသိတယ်။ အထူးသဖြင့် n ကိစ္စရပ်များတွင်၊ ကျွန်ုပ်သည်သိသာထင်ရှားသည့်သတင်းဆောင်းပါးများတွင်ပြောနေခြင်းမဟုတ်သော်လည်းတစ်ခါတစ်ရံတွင်သူတို့ကအင်တာနက်သည်မကောင်းကြောင်းပြောလိမ့်မည်၊ သို့မှသာကျွန်ုပ်တို့၏အသံသည်မရှိနိုင်ပါ၊ သို့မဟုတ်ဆောင်းပါးအားလျှင်မြန်စွာဖြတ်တောက်ပစ်နိုင်သည်။ အခြားသူများကိုအမှန်တကယ်ဝေမျှနိုင်မည်ဟုမျှော်လင့်ရသည်။ ဤအရာသည်ဖြစ်ပျက်နေသောအရာဖြစ်ကြောင်းလူအများသိထားကြပြီး၎င်းသည်လိမ်လည်သူများသည်သင့်ကိုအမှန်တကယ်ရရှိနိုင်သည့်အလွန်အဖြစ်များသည့်အရာဖြစ်သည်ဟုမျှော်လင့်ရသည်။ သူတို့စဉ်းစားရန်လုပ်ဖို့ ကိုယ့်ကိုကိုယ်ဂရုစိုက်ပါ
မင်းမြင်တဲ့အခါအဝါရောင်များအတွက် status သင်္ကေတSkypeအဆက်အသွယ်များ, သင်သူတို့၏ status ကိုအဝေးသို့သတ်မှတ်ထားသည်ကိုသင်တို့သိကြ၏။ ဒီအညွှန်းကိန်းဖြစ်နိုင်သည်ဆိုလိုတာကထိုအဆက်အသွယ်သည်အချိန်အတန်ကြာမလှုပ်မရှားဖြစ်ခဲ့ပြီးကွန်ပျူတာနှင့်ဝေးဝေးနေမည်သို့မဟုတ်အဆက်အသွယ်သည် status ကို Away သို့ကိုယ်တိုင်သတ်မှတ်လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့အများစုသည် Microsoft Teams နှင့်အဝေးမှအလုပ်လုပ်ကြသည်။ မင်းအလုပ်ရှင်ကမင်းရဲ့အလုပ်ချိန်အကြောင်းဘာတွေစောင့်ရှောက်နေတယ်ဆိုတာမင်းစဉ်းစားဖူးသလား။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ဘယ်လောက်ကြာကြာအလုပ်လုပ်ခဲ့တယ်။ ရှာကြစို့။ (ရွှင်လန်းသောသီချင်း) ကောင်းပြီ၊ ဒါနဲ့မိုက်ခရိုဆော့ဖ် 365 အက်ဒမင်စင်တာကိုငါဝင်ရောက်ခဲ့တယ်။
ဒီနေရာတွင်သင်၏အုပ်ချုပ်ရေးမှူးမှမည်သည့်သတင်းအချက်အလက်များကိုစနစ်မှထုတ်ယူနိုင်ကြောင်းကိုပြပါမည်။ အဖွဲ့များတွင်ကိုယ်ပိုင်အပ်နှံထားသည့် admin စင်တာရှိသည်။ သူတို့အားလုံးစာရင်းပြုစုခြင်းနှင့် Teams admin စင်တာကိုသွားခြင်းအားဖြင့်အဲဒါကိုလေ့လာကြပါစို့။
ယခုသင်ရရှိနိုင်သောအစီရင်ခံစာအမျိုးမျိုးကိုကြည့်ကြပါစို့။ လေ့လာသုံးသပ်မှုများနှင့်အစီရင်ခံစာများအရအစီရင်ခံစာများကိုဤတွင်တွေ့နိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်အက်ပလီကေးရှင်းကိုအသုံးပြုခြင်း။
နောက်ဆုံးရက် ၃၀ ကိုသွားပြီးအစီရင်ခံစာကို run လိုက်ရအောင်။ ဒီမှာ Teams မှာသုံးတဲ့ app အမျိုးမျိုးကိုငါတို့တွေ့တယ်။ ဤကိစ္စတွင် Microsoft အက်ပလီကေးရှင်းလေးမျိုးနှင့်တတိယပါတီအက်ပလီကေးရှင်းနှစ်ခုရှိသည်။
ဤအချက်အလက်သည်အသုံးပြုသူထံမှမဟုတ်ဘဲ၎င်းသည်ယေဘူယျဖြစ်သည်။ Trello ကိုအသုံးပြုသောတက်ကြွသောအသုံးပြုသူ ၂ ယောက်ရှိသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့မြင်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့တွင်eTeams သုံးနေသောတက်ကြွသောသုံးစွဲသူလေးယောက်ရှိသည်။ သို့သော်ဤတွင်အသုံးပြုသူသည်ဤလျှောက်လွှာကိုမည်သည့်နေရာတွင်အသုံးပြုသည်ကိုမမြင်ရပါ။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစီရင်ခံစာများကိုပြန်သွားကြစို့။ အကယ်၍ သင်၏ကုမ္ပဏီတွင်အစီအစဉ်များရှိသည်ဆိုပါကဤအစီရင်ခံစာများကို အသုံးပြု၍ သုံးစွဲသူများသုံးစွဲသည့်မိနစ်အရေအတွက်နှင့်ခေါ်ဆိုမှုများ၏ကုန်ကျမှုအကြောင်းသတင်းအချက်အလက်ကိုသင်ရရှိနိုင်သည်။ အသင်းများသို့ရောက်ရန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားကိုကြည့်ရှုရန် Teams တွင်ကိရိယာအသုံးပြုခြင်းကိုကြည့်ပါ။
Windows, Mac, iOS, Android စသည်တို့ပဲဖြစ်ဖြစ်အသင်းကိုအသုံးပြုခြင်းကော။ “ ဒီအစီရင်ခံစာကိုလုပ်ကြည့်ရအောင်။ ထို့ကြောင့်ဤနေရာတွင်ကျွန်ုပ်တို့တွင်မတူညီသောအဖွဲ့များစာရင်းရှိပြီးအဖွဲ့တစ်ခုအတွင်း၌မည်သည့်မက်ဆေ့ခ်ျများတင်ထားသည်၊ မည်မျှပြန်ကြားချက်ရှိသည်၊ အဖွဲ့အတွင်းဖွဲ့စည်းထားသည့်အရေးတကြီးသတင်းစကားများ၊ တုံ့ပြန်မှုများ၊ ဖော်ပြချက်များနှင့်အစည်းအဝေးများကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့မြင်နိုင်သည်။
သင်ဒီမှာအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကိုနှိပ်လိုက်လျှင်၊ အသင်းသားအားလုံးနှင့်သင်အဖွဲ့ ၀ င်တစ် ဦး ကိုနှိပ်လျှင်အဖွဲ့များရှိသူတို့၏လုပ်ဆောင်မှုများနှင့် ပတ်သက်၍ အနည်းငယ်ပိုမိုလေ့လာလိမ့်မည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကအစည်းအဝေးနှစ်ခု၊ တစ်ကြိမ်ဖုန်းခေါ်တာ။ Call History အောက်တွင်ဤသူနှင့်တူသောဖုန်းခေါ်ဆိုခြင်းကိုသင်တွေ့နိုင်သည်။
သင်ခေါ်ဆိုမှု၏ကြာချိန်နှင့်ပါဝင်သူများကိုလည်းတွေ့နိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းကိုသာကျွန်ုပ်နှိပ်လိုက်လျှင်၊ ဥပမာ၊ ကျွန်ုပ်သည်ဤအစည်းအဝေးနှင့်မည်သူဖြစ်သည်၊ ခေါ်ဆိုမှု၏ကြာချိန်မှာဤတွင်ရှိပြီးသူတို့အသုံးပြုသောကိရိယာများနှင့် ပတ်သက်၍ နည်းပညာဆိုင်ရာအချက်အလက်များပိုရရှိသည်။ ချိတ်ဆက်ရန်နှင့်အိုင်ပီလိပ်စာစသဖြင့်တို့ကိုယခုအသုံးပြုမှုအစီရင်ခံစာများသို့ သွား၍ အဖွဲ့များမှသုံးစွဲသူလုပ်ဆောင်မှု၏အောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်ကိုကြည့်ကြစို့။ ငါအစီရင်ခံစာကိုဤနေရာတွင် run သောအခါ၊ ကျွန်ုပ်သည်ချန်နယ်လိပ်စာစုစုပေါင်းအရေအတွက်၊ ပြန်ကြားချက်များစသည်တို့ကိုခြုံငုံ။ ရသော်လည်းဤတွင်ကျွန်ုပ်တို့၌လူများ၏ဖော်ပြချက်အမည်များနှင့်သူတို့၏အဖွဲ့များပေါ်တွင်သူတို့၏လုပ်ဆောင်မှုများရှိသည်။
လူတစ် ဦး ချင်းစီဆီသို့ပေးပို့သောရုပ်သံလိုင်းမည်မျှရှိသနည်း။ မက်ဆေ့ခ်ျများပြန်ပို့ပါ၊ စာများပို့ပါ၊ မက်ဆေ့ခ်ျပို့ပါ၊ စုဝေးပါ။ ဒါကြောင့်ဒီမှာကအသုံးပြုသူအားဖြင့်ဖြစ်ပြီး, မရှိတော့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ။
တ ဦး တည်း -on- တ ဦး တည်းခေါ်ဆိုမှုဘယ်နှစ်ယောက်စုစုပေါင်းအသံအချိန်, စုစုပေါင်းဆောင်းပါးအချိန်, မျက်နှာပြင်မျှဝေအချိန်နှင့်၎င်းတို့၏လတ်တလောလှုပ်ရှားမှု။ ၎င်းတွင် timestamp မရှိပါ၊ ၎င်း၏နောက်ဆုံးလှုပ်ရှားမှု၏နေ့ရက်ဖြစ်သည်။ ကောင်းပြီ၊ ဒါဆိုသင်အသုံးပြုသူမြင်သောအချက်အလက်ဖြစ်သည်၊ ယခုကျွန်ုပ်တို့ဤနေရာတွင်စစ်ဆေးသည်မှာအဖွဲ့များအတွက်သာဖြစ်သည်။
အခြား App များကော။ လူတစ် ဦး ချင်းစီအတွက်သတင်းအချက်အလက်ပိုများလာသလား ကောင်းပြီ၊ Microsoft 365 admin စင်တာကိုပြန်သွားရအောင်။ ရဲ့အစီရင်ခံစာများကိုကြည့်ကြပါစို့။ ဒီမှာထုတ်လုပ်မှုအဆင့်သတ်မှတ်ချက်ရှိတယ်။
၎င်းသည်အဖွဲ့အစည်းအဆင့်တွင်သာဖြစ်သည်။ ဒီတော့ဒီမှာပြောတာကအသုံးပြုသူအဆင့်မှာရမှတ်တွေမရဘူး။ ဤအရာသည်သင်၏အဖွဲ့အစည်းကိုသက်တူရွယ်တူအခြေခံစံနှုန်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်ရန်အလွန်ကောင်းသောနည်းလမ်းဖြစ်သည်။
၎င်းသည်မတူညီသောအမျိုးအစားခွဲခြားထားသော်လည်းဤအရာအားလုံးသည်အဖွဲ့အစည်းအဆင့်တွင်ရှိသည်။ အခုအသုံးပြုမှုကိုသွားပြီးဒီကိုရောက်ပြီဆိုတာကြည့်ရအောင်။ ဤအစီရင်ခံစာများကကုမ္ပဏီရှိလူများသည် ၀ န်ဆောင်မှု ၃၆၅ ကိုမည်သို့အသုံးပြုနေသည်ကိုပြသသည်။
ကျွန်တော်အောက်ကိုဆင်းလိုက်ရင်မိုက်ကရိုဆော့ ၃၆၅ ၀ န်ဆောင်မှုကိုဘယ်သုံးနေတယ်ဆိုတာကိုတွေ့နိုင်တယ်။ ၀ န်ဆောင်မှုအားဖြင့်ကြည့်လို့ရမယ်။ မိုက်ကရိုဆော့ ၃၆၅ အက်ပ်တွေကိုတွေ့နိုင်တယ်။ ဒါပေမယ့်ဒါကယေဘူယျပါပဲ။ ဒါဆိုဒါကအဖွဲ့အစည်းအဆင့်မှာပါ။ ဒီ app သည်မည်သည့်တက်ကြွသောအသုံးပြုသူကိုအသုံးပြုနေသည်ကိုအတိအကျမသိနိုင်ပါ။
ငါအီးမေးလ်လှုပ်ရှားမှုနှင့် Microsoft Teams လှုပ်ရှားမှုကိုလည်းတွေ့နိုင်သည်။ ဤအစီရင်ခံစာကိုဤနေရာတွင်ကြည့်ပါ။ နောက်ထပ်ကြည့်ရအောင်၊ scroll လုပ်ပါ။ ဤနေရာသည်အသုံးပြုသူအမည်အားလုံးကိုတွေ့ရပြီးအချို့ ၀ န်ဆောင်မှုများအတွက်သူတို့၏လှုပ်ရှားမှုများကိုတွေ့နိုင်သည်။ ဒီတော့ဒီမှာ၊ သုံးစွဲသူစာဖတ်သူကအီးမေးလ်တစ်စောင်ကိုနောက်ဆုံးအကြိမ်ပေးပို့တဲ့အခါ၊ သူတို့က OneDrive မှာတစ်ခုခုလုပ်ခဲ့တာနောက်ဆုံးအချိန်ဘယ်အချိန်လဲ။ ဒါမှမဟုတ် Skype မှာ SharePoint မှာတစ်ခုခုလုပ်ခဲ့ပါသလား။ အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့မှာ Yammer နဲ့ Microsoft Teams မှာနောက်ဆုံးလုပ်ဆောင်မှုတွေရှိတယ်။ OK ကိုအသုံးပြုသူအဆင့်မှာရတယ်။ အခြားသတင်းအချက်အလက်များကိုအဖွဲ့အစည်းအဆင့်တွင်ရရှိနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်ဝေးလံခေါင်သီသောအဖွဲ့နှင့်အလုပ်လုပ်စဉ်ကျွန်ုပ်၏အတွေ့အကြုံအရ၊ မိုက်ခရိုစီမံခန့်ခွဲခြင်းထက်ဥပမာ - စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်းနှင့်ရည်မှန်းချက်များကိုသတ်မှတ်ခြင်းသည် ပို၍ ကောင်းသည်။ လူတစ် ဦး ချင်းစီနှင့်၎င်းတို့၏အလုပ်ချိန်များကိုခြေရာခံရန်။
သင် Planner အကြောင်းပိုမိုလေ့လာလိုပါကဤဆောင်းပါးကိုကြည့်ပါ၊ ဤဆောင်းပါးသည်အသုံး ၀ င်သည်ဟုသင်မျှော်လင့်ပါ။ အကယ်၍ သင်ကစာရင်းသွင်းထားခြင်းမရှိသေးပါကသင့်လက်မကို ဖြတ်၍ ဤချန်နယ်ကိုစာရင်းသွင်းရန်မမေ့ပါနှင့်။ စောင့်ကြည့်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ နောက်ဆောင်းပါးမှာတွေ့မယ်။ (တေးဂီတ)
တစ်စုံတစ် ဦး က Skype မိုဘိုင်းပေါ်တွင်ရှိမရှိသင်မည်သို့ပြောနိုင်သနည်း။
အကယ်၍သင့်သူငယ်ချင်း၏နာမည်ဘေးတွင်အစိမ်းရောင်စစ်ဆေးသောအမှတ်အသားတစ်ခုရှိသည်၊ သူမဖုန်းခေါ်ဆိုခြင်းသို့မဟုတ်ရနိုင်သည်Skypeသတင်းစကား ဒီအမှတ်အသားသည်သင်၏အဆက်အသွယ်သည်အွန်လိုင်းနှင့် logged in ပြသည်Skype။အကယ်၍အဖြူရောင်စက်ဝိုင်းပါသောအစိမ်းရောင်တိမ်တိုက်ကိုသင်မြင်တွေ့ရပြီ၊ သင်၏အဆက်အသွယ်သည်လက်ရှိတွင်စကားပြောဆိုနေဆဲဖြစ်သည်။Sep 13 2017
ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဆယ့်ငါးခုသင့်ဖုန်းကိုဟက်ခံရခြင်းကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏စမတ်ဖုန်းများကိုကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်အချက်အလက်များကိုအများဆုံးသိမ်းဆည်းထားသည့်ကျွန်ုပ်တို့၏လုံခြုံမှုရှိသောဒစ်ဂျစ်တယ်နေရာများအဖြစ်မကြာခဏမြင်ကြသည်။ ဓာတ်ပုံများမှခရက်ဒစ်ကတ်အသေးစိတ်အချက်အလက်များအထိအချို့လူများသည်၎င်းတို့၏စကားဝှက်များကိုမှတ်စုများတွင်ပင်သိမ်းဆည်းထားသည်။ ဒါကသိပ်များလွန်းတယ်၊ ဟုတ်ပါတယ်၊ သင့်ရဲ့ဖုန်းပေါ်မှာအခြေခံပြီးသို့မဟုတ်စည်းညှိထားသည့်အလုပ်ပစ္စည်းများအပါအ ၀ င်သင်၏စာသားနှင့်အီးမေးလ်ဆက်သွယ်မှုအားလုံးကိုသင်ရရှိနိုင်ပါသည်။ အကယ်၍ သင်၏ကိုယ်ပိုင်ဇုန်ဟုသင်ထင်လျှင်၎င်းသည်ယခုအချိန်အထိမည်သည့်စက်ကိရိယာမျှမရှိပါ။ သင့်ဖုန်းကိုဘယ်လို hack မလဲ၊ ဘယ်လို detect လုပ်မလဲ၊ သင့်ရဲ့ဖုန်းကို hack မခံရအောင်ဘယ်လိုကာကွယ်မလဲဆိုတာကိုကျွန်ုပ်တို့ရှာဖွေနိုင်တဲ့ဖြစ်နိုင်ချေရှိတဲ့အန္တရာယ်ကိုလျှော့ချဖို့ hack လို့မရပါဘူး။ ပထမဆုံးအရေးကြီးတဲ့မေးခွန်းကနေစတင်ပြီးသင့်ရဲ့ဖုန်းကိုဘယ်လို hack နိုင်မလဲဆိုတာကြည့်ကြရအောင်။ အလွယ်ဆုံးနည်းကတော့သင်၏ဖုန်းကိုမိနစ်အနည်းငယ်ကြာသိမ်းယူပြီး Spy Phone Appspies II သို့မဟုတ် Spy ခေတ်ကဲ့သို့စပိုင်အက်ပလီကေးရှင်းများတပ်ဆင်ရန်ဖြစ်သည်။ ထိုအက်ပ်များသည်အခြေခံအားဖြင့်ဝင်လာသောနှင့်အထွက်ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုများကိုမှတ်တမ်းတင်ပြီးစာသားမက်ဆေ့ခ်ျများကိုမှတ်တမ်းတင်သည့်မိုဘိုင်း tracker များဖြစ်သည်။
မိဘများကိုလုံခြုံအောင် ထား၍ စီးပွားရေးသမားများမှသူတို့၏ ၀ န်ထမ်းများအားစောင့်ကြည့်စစ်ဆေးပါ။ အမှန်စင်စစ်ဤအက်ပ်များကိုအခြားသူများ၏လုံခြုံမှုကိုဂရုမစိုက်သောသူများကမကြာခဏအသုံးပြုသည်ဖြစ်စေကော်ဖီဆိုင်သို့မဟုတ်လေဆိပ်ရှိအကာအကွယ်မဲ့ Wi-Fi ကွန်ယက်တစ်ခုတွင်လေဆိပ်ရှိအခမဲ့ Wi-Fi အစက်အပြောက်များကိုကျွန်ုပ်တို့အားလုံးရှာဖွေရန်အလွန်လွယ်ကူသည်။ နှင့်စားသောက်ဆိုင်များ၊ အထူးသဖြင့်ခရီးသွားလာခြင်းတွင်အခမဲ့ Wi-Fi ကိုသုံးဖူးပါသလား။ သင်၏အသွားအလာအားလုံးကိုသင့်ပတ်ဝန်းကျင်ရှိလူများအားဝေမျှရန်အများပြည်သူသုံး Wi-Fi နည်းလမ်းရှိပါကလက်ျာတက်သည်ကိုနှိပ်ပါ။ ထူးခြားဆန်းပြားသောနေရာတစ်ခုသို့သင်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုလိုသည့်အခါဤအချက်ကိုစိတ်ထဲမှတ်ထားပါ။
သင်၏ယုံကြည်စိတ်ချရသောကွန်ယက်တစ်ခုသို့ရောက်သည်အထိစောင့်ဆိုင်းသင့်သည်။ သင်၏ဖုန်းကိုအမည်မသိ USB မှတစ်ဆင့်၊ လေယာဉ်သို့မဟုတ်ကားပေါ်တွင်ပင်ဒေတာအားလုံးကိုဖော်ထုတ်ပြီးလွှဲပြောင်းနိုင်သည့်အန္တရာယ်ရှိသည်။ စမတ်ဖုန်းအမျိုးမျိုးတွင်လုံခြုံရေးအင်္ဂါရပ်အမျိုးမျိုးရှိသည်။ ၎င်းတို့ထဲမှတစ်ခုသည် PCB နှင့်ချိတ်ဆက်သောအခါအချက်အလက်များ၏တူညီသောပမာဏကိုမျှဝေသည်။ ၎င်းတို့သည်သင့်စက်၏အမည်ကိုတင်းကျပ်သောနံပါတ်စဉ်၊ ထုတ်လုပ်သူလုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုနှင့်ဖိုင်စနစ်သတင်းအချက်အလက်နှင့်အီလက်ထရောနစ်ချစ်ပ်အိုင်ဒီတို့ကသင့်ကိုအသုံးချနိုင်သောသတင်းအချက်အလက်များစွာပေးပို့နိုင်သည်၊ သင်နှင့်အတူမက်ဆေ့ခ်ျတစ်ခုပို့သောအခါ၎င်းသည်သင်၏ဘဏ်စာရင်း၊ ငွေလွှဲခြင်းသို့မဟုတ်သင်၏ဓါတ်ပုံများဖြစ်သည်ဟုဖော်ပြထားသော link တစ်ခုရရှိလိမ့်မည်။ ၎င်းကို နှိပ်၍ ဖိုင်ကိုကူးယူပါ၊ ပြီးနောက်သင့်ဖုန်း၏အကြောင်းအရာအားလုံးကိုဖော်ပြလိမ့်မည်။ ကမ္ဘာ့အနှံ့ရှိဖုန်းဘူတာအများစုမှအသုံးပြုသောအချက်ပြစနစ် (၇) သို့မဟုတ် (SS 7) ၏အကူအညီဖြင့်ဟက်ကာများကိုဟက်ကာများကသင်၏စာသားမက်ဆေ့ခ်ျများကိုဖတ်နိုင်သည်၊ သင်၏ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုများကိုနားထောင်ပြီးသင်၏ဆဲလ်ဖုန်းတည်နေရာကိုခြေရာခံနိုင်သည် s, ဒါပေမယ့်သင်ဟာကျော်ကြားသူတစ်ယောက်မဟုတ်ရင်စိတ်ပူစရာမလိုပါ။ ဟက်ကာများသည်သင်၏ဖုန်းကိုယခုအချိန်တွင်သင့်ဖုန်းကိုတိုက်ခိုက်ရန်နည်းလမ်းများစွာရှိသည်ကိုသင်တွေ့နိုင်ပါသည်။ မေးခွန်းကိုဖြေဆိုရန်အချိန်တန်ပြီ။ သင်၏ဖုန်းသည်နံပါတ် ၁၅ ဖြစ်ကြောင်းမည်သို့ပြောရမည်ကိုကျွန်ုပ်တို့အားလုံးဂရုပြုကြသည်။ သင်သည်သင်၏ဖုန်းတွင်အက်ပလီကေးရှင်းအသစ်များကိုရှာ။ မရရှိနိုင်ပါ။ တစ်ခါတစ်ရံဖုန်းထုတ်လုပ်သူများနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများကသင်၏ဖုန်းသို့အက်ပ်အသစ်များကိုအမှန်တကယ်တပ်ဆင်နိုင်သည်ဆိုပါက၊ စိတ်မကောင်းခြင်းထက်လုံခြုံမှုရှိခြင်းကပိုသေချာသည်။ ထို့ကြောင့်သင်အက်ပ်များအမှန်ကိုသေချာအောင်ပြုလုပ်ရန်လိုအပ်သည်။ အကယ်၍ ထုတ်လုပ်သူရောသင်အပလီကေးရှင်းကိုတပ်ဆင်မထားပါက၎င်းကိုဂူးဂဲလ်တွင်ရှာဖွေပြီးအခြားအသုံးပြုသူများသို့မဟုတ်ပိုမိုကောင်းမွန်ပြီးယုံကြည်စိတ်ချရသောဝက်ဘ်ဆိုက်များကဘာတွေပြောနေသည်ကိုကြည့်နိုင်သည်။ သင်ဘယ်တုန်းကမှမတပ်ဆင်ထားသေးသောအက်ပလီကေးရှင်းအသစ်များရှိစဉ်က၎င်းသည်ဟက်ကာများဖြစ်ခဲ့ရသည်၊ သင့်ဖုန်းတွင်ကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်ရန်သင်၏အက်ပလီကေးရှင်းအဟောင်းများမှာပြproblemsနာများရှိသည်။
တစ်စုံတစ်ခုသည်သူတို့၏စနစ်တကျလည်ပတ်မှုကိုအနှောက်အယှက်ဖြစ်စေသည်။ သင်၏ဖုန်းနံပါတ် 13 တွင်အများဆုံး malware ဖြစ်နိုင်သည်၊ သင်၏ဖုန်း၏ဘက်ထရီသက်တမ်းသည်တိုလွန်းသည်ကိုတွေ့ရှိသောအခါသင်၏ဖုန်းသည်ရုတ်တရက်အလွန်လျှင်မြန်စွာကုန်သွားသည်။ အကြောင်းပြချက်တစ်ခုရှိရမယ်၊ သင့်ဖုန်းမှာအကျွမ်းတဝင်မရှိသောအက်ပလီကေးရှင်းတစ်ခု၊ အပလီကေးရှင်းများသို့မဟုတ်ကြိုတင်သတိပေးမှုမရှိဘဲနောက်ခံစနစ်ဖြင့်လည်ပတ်နေလျှင်သင်ဤအရာသည်ဖွင့်စရာတောင်မလိုပါ၊ သို့သော်၎င်းတို့သည်သင်၏ဖုန်းနံပါတ် ၁၂ ၏စွမ်းအားကိုရယူနေတုန်းဖြစ်သည်။ သင်၏စမတ်ဖုန်းသည်မကြာခဏထင်သည်ထက်နှေးကွေးသောကြောင့်မြန်နှုန်းမြင့်လည်ပတ်မှုနှုန်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖုန်းများအဘယ်ကြောင့်ဖြစ်ရသနည်း။ ဘက်ထရီသက်တမ်းတိုတောင်းသကဲ့သို့၎င်းသည်သင်၏ဖုန်းနောက်ခံတွင်ရှိသည့် malware များကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည်၊ ၎င်းမကောင်းသည့်အက်ပ်များသည်သင်၏ဖုန်းမှဒေတာများကိုလွှဲပြောင်းပေးသည်၊ ထို့ကြောင့်စွမ်းဆောင်ရည်မှာဆိုးဝါးစွာကျဆင်းသွားသည်နှင့်တူသည်။ စမတ်ဖုန်းသည်စမတ်ကျသည်၊ သို့သော်ဟက်ကာများသည်တစ်ခါတစ်ရံတွင် ပို၍ ပင်လိမ္မာပါးနပ်သည်။ 11, ဖုန်း warmYour ဖုန်းကိုနွေးရရှိသွားတဲ့ရရှိသွားတဲ့သော်လည်းသင်ဖုန်းပေါ်မှာမဟုတ်ပါဘူးသို့မဟုတ်ပေါ်မှာအလုပ်လုပ်နေလျှင်ပင်သင်ကဖြစ်နိုင်သငျသညျ, ကအအေးရရှိသွားတဲ့အထူးသဖြင့်အခါ, တောင်များကဲ့သို့စေခြင်းငှါ, သင့်ရဲ့ဆက်သွယ်ရေး tool ကို၏ပူနွေးသောအထိအတွေ့ခံစားဖို့အသုံးပြုများနှင့်နေကြ ဒါပေမယ့်အကြောင်းပြချက်မရှိဘဲနွေးထွေးမှုကကောင်းတဲ့လက္ခဏာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒီမှာဆိုလိုတာကသင့်ဖုန်းကိုအပူအအေးပေးနေတာ၊ နံပါတ်များကိုခေါ်ခြင်းသို့မဟုတ် application များဖွင့်တာတွေလုပ်နေသည့်အမည်မသိအက်ပလီကေးရှင်းအချို့ရှိသည်။ ၎င်းသည်အချို့သောထူးဆန်းသောလုပ်ဆောင်မှုတစ်ခု၏ရလဒ်ဖြစ်ပြီးသင်မကြာမီကခေါ်ဆိုမှုများ၌ Ghostbusters များပေါ်လာလိမ့်မည်ဟုသင်ခေါ်တော့မည်။ S သည်ဟက်ကာများသည်သင်၏ကိရိယာကို သုံး၍ ဈေးကြီးသောအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာခေါ်ဆိုမှုများကိုပြုလုပ်နိုင်သည်။ သင်တို့သည်လည်းထိုသူတို့အဘို့သင်သည်အားသွင်းတဲ့သူကုမ္ပဏီများအဖို့ဖုန်းခေါ်ရန်သင့်ကူးစက် device ကိုသုံးနိုင်သည်။
ဟုတ်ပါတယ်၊ သူတို့ဟာနိုင်ငံခြားကိုကိုယ်တိုင်မခေါ်ကြဘူး၊ ဒါပေမယ့်သူတို့ရဲ့လစာပေးတဲ့ ၀ န်ဆောင်မှုကိုသူတို့ရဲ့ဖောက်သည်တွေဆီနံပါတ်ရှစ်ပေးပို့ပြီးမကြာသေးခင်ကခေါ်ဆိုထားတဲ့ဖုန်းနံပါတ်တွေလိုပဲထူးဆန်းတဲ့စာသားမက်ဆေ့ခ်ျတွေကိုလက်ခံနိုင်အောင်သူတို့ပေးတဲ့ ၀ န်ဆောင်မှုကိုပေးတယ်။ သင်၏ဖုန်းမှပေးပို့ပါ။ သင်သည်သင်၏ဖုန်းမှ၎င်းကိုအသုံးပြုပါက၊ သင်ကိုယ်တိုင်ဖြစ်လျှင်သင်၏သူငယ်ချင်းများသို့မဟုတ်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များမှသူတို့နံပါတ်ကိုလျစ်လျူရှုမထားပါကထူးဆန်းသောမက်ဆေ့ခ်ျများရရှိပါကသင့်အကြောင်းပြောပြလိမ့်မည်။ သင်၏အီးမေးလ်တွင်လည်းဖြစ်နိုင်သည်။ ခုနစျပါး, သငျသညျဒါဟာအလွန်မှားယွင်းတဲ့နှင့်အများဆုံးဖွယ်ရှိအမှားထုတ်လုပ်သူအရေအတွက်ကခြောက်လမဟုတ်ပါဘူးစသည်တို့ကို, ဝမ်းမြောက်သောစိတ်ကိုတိုးမြှင့်, သင့် device ကိုကွဲပြားခြားနားသော apps များဖွင့်လှစ်ပါလိမ့်မယ်ကို turn off ဖို့ကြိုးစားနေ, သင့်ရဲ့ device ကို turn off နိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်, ဆူညံသံရှိပါသည်သို့မဟုတ် ခေါ်ဆိုမှုများအတွင်းပဲ့တင်သံများ၊ သင်အော်သံတစ်ခုကြားလျှင်သို့မဟုတ်ပဲ့တင်ထပ်နေလျှင်၊ အခြားသူတစ်စုံတစ်ယောက်ကသင့်ဖုန်းကိုမရရှိနိုင်ဘူးဆိုလျှင်၊ သင့်ဖုန်းနှင့်သင်၏စကားဝှက်ကိုခိုးနားထောင်ခြင်းဘရောက်ဇာကိုခြေရာခံနိုင်သည်။ တစ်စုံတစ် ဦး က malware ထည့်သွင်းထားသည် o သင့်ဖုန်းဖုန်းသည်သင်၏အွန်လိုင်းဆက်သွယ်မှုများကိုဖတ်နိုင်ပြီးသင်၏လှုပ်ရှားမှုများကိုခြေရာခံနိုင်သည်။ သင်၏ဘရောက်ဇာနှင့်အင်တာနက်အကြားရှိနေရာများတွင်ပုံမှန်အားဖြင့်ဆိုဒ်များကိုကြည့်ရှုခြင်းမှတားဆီးသည်။ နံပါတ် (၄) သင်၌မြင့်မားသောဆယ်လူလာဒေတာအသုံးပြုမှုကိုရှာဖွေတွေ့ရှိသည်။ ဒေတာအသုံးပြုမှုသည်လျင်မြန်စွာကြီးထွားလာသောကြောင့်သင်တစ်လလျှင်အချို့သောအသွားအလာအတွက်ပေးချေလျှင်၎င်းသည်အပိုကုန်ကျစရိတ်များကျနိုင်သည်။ ၎င်းသည်သင်၏ဖုန်းအားလုံးမှမဟုတ်သည့်အချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ အသေးစိတ် app ကိုအသွားအလာအသုံးပြုမှု။
သင်၏အက်ပလီကေးရှင်းတစ်ခုချင်းစီတွင်မိုဘိုင်းဒေတာမည်မျှအသုံးပြုသည်ကိုသင်ကအတိအကျပြောပြသည်။ သင်သည်ဤအက်ပလီကေးရှင်းကိုအရင်းအမြစ်အသစ်တစ်ခုမှမကြာသေးမီကထည့်သွင်းခဲ့ပြီးသင်၏ဒေတာများကိုစားနေသည်။ ဒီ app ဟာ malware ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာဘယ်လောက်ရူးသလဲ။ သူတို့ကိုဖျက်ပါ။
နံပါတ်သုံး pop-ups များသည်သင်၏စက်ပစ္စည်းပေါ်တွင်ဘယ်နေရာမှပေါ်ထွက်လာခြင်းမရှိပါကသင်မဟုတ်လျှင်သင်၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်သင်မြင်ရလိမ့်မည်။ ဗိုင်းရပ်စ်နှိမ်နင်းရေးဆော့ဖ်ဝဲလ်ကောင်းကောင်းသုံးပါ။ သင်ကထီဆုကိုဆွတ်ခူးပြီးပြီသို့မဟုတ် iPhone အသစ်တစ်လုံးရပြီဟုသင့်အားအသိပေးလိမ့်မည်။ သင်လုပ်ရမှာကခလုတ်ကိုနှိပ်လိုက်ရုံပါပဲ။
သင်၏ဖုန်းပေါ်ရှိထိုကဲ့သို့သော Pop-ups များသည် malware မှထုတ်လုပ်နိုင်သည်။ သူတို့ကသူတို့ပြောတာကိုမလုပ်ဘူး။ နံပါတ် (၂) သင်၏ဖုန်းမှပေးပို့သောအီးမေးလ်ကို Spam Filter များဖြင့်ပိတ်ဆို့ထားသည်။ တတိယပါတီသင့်ဖုန်းကိုဖတ်ရန်သင့်ဖုန်းကိုသူတို့ထိန်းချုပ်ထားလျှင်မည်သို့ဖြစ်မည်နည်း။ သင်၏အီးမေးလ်အားလုံးကိုခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ server hackers များမှတဆင့်ပေးပို့ရန်သင်၏အီးမေးလ်ဖွဲ့စည်းပုံကိုပြောင်းလဲသွားနိုင်သည်။ ထို server နံပါတ်သို့သင်တိုက်ရိုက်ဝင်ရောက်ခွင့်ရနိုင်သည် အားကောင်းတယ် (သို့) ဖုန်းပြောနေတုန်းထူးဆန်းတဲ့ဆူညံသံတွေရှိတယ်။ တစ်ခုခုမှားယွင်းနေနိုင်တယ်။ အများအားဖြင့်၊ ဒီပြissuesနာတွေဟာလုံခြုံရေးပြတ်တောက်မှုနဲ့မသက်ဆိုင်တဲ့ပြissuesနာတွေကိုညွှန်ပြနေတယ်၊ ​​ဒါပေမဲ့အဲဒီရောဂါလက္ခဏာတွေကိုခေတ္တခဏကြုံတွေ့ရတဲ့အခါသင်အမြဲနောင်တရနေတဲ့လုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုကိုသတိပြုမိတဲ့အခါ၊ သင်၏ဖုန်းတွင်ဤဆိုင်းဘုတ်များတွေ့ပါကမှန်ကန်သောအရေးယူမှုပြုရန်လိုအပ်မလိုစဉ်းစားရန်ကောင်းသည်။ Anti-malware မိုဘိုင်းဆော့ဖ်ဝဲကိုသုံးပါ။
သင်တပ်ဆင်မထားသည့်အက်ပလီကေးရှင်းများကိုဖျက်ပါ။ အသွားအလာအလွန်အကျွံသုံးစွဲနေသည့်စိတ်မချရသောအက်ပ်များကိုဖျက်ပါ။ ဖြစ်နိုင်လျှင်သင့်ဖုန်းကိုပြန်လည်သတ်မှတ်ပြီးမူလ setting သို့ပြန်သွားနိုင်သည်။ ၎င်းသည်သင့်အတွက်မလုံလောက်ပါကကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသိသောပညာရှင်တစ်ယောက်နှင့်ဆက်သွယ်ပါ။ ကာကွယ်ခြင်းကကုသတာထက်ပိုကောင်းတယ်။ ဒါကြောင့်သင် link တစ်ခုပါတဲ့မက်ဆေ့ခ်ျတစ်ခုရပြီး url အပြည့်အစုံကိုမမြင်ရရင်သင့်ဖုန်းကိုဟက်ကာများကနေကာကွယ်ဖို့သင်ဒီမှာလုပ်နိုင်တာကဘာလဲ။ သင့်ဖုန်းကိုမရင်းနှီးသောကွန်ပျူတာတစ်ခုမှအားသွင်းတဲ့အခါဘယ်တော့မှမဖွင့်ပါနဲ့။ ဆက်သွယ်ထားသောဆက်သွယ်မှုကိုသာရွေးချယ်ပါ။ save passwords အင်္ဂါရပ်ကိုအသုံးမပြုပါနှင့်။ အများသုံး Wi-Fi ကွန်ယက်များသို့အလိုအလျောက်ဆက်သွယ်မှုကိုပိတ်ပါ။ ၎င်းကိုကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်ပါ။ Wi-Fi ကွန်ယက်များအကြောင်းနောက်ထပ်အချက်တစ်ချက်မှာအခမဲ့အင်တာနက်သို့မဟုတ် Wi-Fi ကဲ့သို့သောသံသယဖြစ်ဖွယ်အမည်များရှိသောကွန်ရက်များကိုရှောင်ရှားပါ။ စကားဝှက်ကိုကာကွယ်ထားသည်။ အထူးသဖြင့်သင်ကော်ဖီဆိုင်တစ်ခုတွင်ရှိနေလျှင်အများပြည်သူသုံး Wi-Fi ကွန်ယက်များတွင်အွန်လိုင်း ၀ ယ်ယူခြင်းသို့မဟုတ်ငွေလွှဲခြင်းမပြုလုပ်ပါ။ အကယ်၍ သင်သည် Android ကိုအသုံးပြုပါကစိတ်ချရသောဗိုင်းရပ်စ်နှိမ်နင်းရေးဆော့ဖ်ဝဲကိုတပ်ဆင်ပြီးသင့်ဖုန်းသို့လျှို့ဝှက်နံပါတ်ထည့်ပါ။ ဤဆောင်းပါးသည်အသုံးဝင်လျှင်၎င်းကိုလက်မလျှော့ပါနှင့်။ သင်၏ဖုန်းကိုယခုလုံခြုံစွာထားပါ။ သင်သည်မည်သည့်နောက်ဆုံးသတင်းများကိုမျှလက်လွတ်မခံရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ရုပ်သံလိုင်းသို့မည်သို့စာရင်းသွင်းရမည်ကိုသင်သိသည်။
Skype ရဲ့ status ကဘာကိုဆိုလိုတာလဲ။
Skype အခြေအနေအရောင်များကဘာကိုဆိုလိုပါသနည်း။ 1 Skype အခြေအနေအရောင်များကဘာကိုဆိုလိုသနည်း။ နံပါတ် ၁ လိမ္မော်ရောင်အစက်သည်အဆက်အသွယ်တစ်ခုမှမဖတ်ရသေးသောသတင်းကိုပြသည်။ ...2အစိမ်းရောင်ဖျော့ဖျော့ဗီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုခလုတ်ဆိုသည်မှာအဆက်အသွယ်သည်အော့ဖ်လိုင်းသို့မဟုတ်မမြင်ရသောအရာဖြစ်သည်ဟုဆိုလိုသည်။ ...3သင်၏အဆက်အသွယ်များ၏အမည်များဘေးတွင်အဝါရောင်ပုံသင်္ကေတသည်သင်၏အဆက်အသွယ်များသည်သူတို့၏အခြေအနေကို“ ပယ်ဖျက်” ထားပြီဟုဆိုလိုသည်။ ...
ဆိုလိုတာက Skype ကိုသင်ပထမဆုံးစဖွင့်ချိန်မှာသင့်ရဲ့ပုံမှန် settings ကိုဆိုလိုတယ်။ သင်၏အဆက်အသွယ်များသည်သင်အွန်လိုင်းရှိကြောင်းတွေ့မြင်နိုင်ပြီးသင်နှင့်ဆက်သွယ်နိုင်သည်။ Instant message များကို https: //support.skype.com/en/faq/FA34699/what-a ... ချက်ချင်းပို့ပေးပါလိမ့်မည်။ စိတ်မကောင်းပါဘူး၊ ဒီကမကူညီဘူး ကောင်းတယ် သင့်ရဲ့တုံ့ပြန်ချက်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ငါမက်ဆေ့ခ်ျပို့သောအခါအဖွဲ့များရှိဤ Skype အိုင်ကွန်သည်အဘယ်အရာကိုဆိုလိုသနည်း။
Teams အသုံးပြုသူနှင့် Skype အသုံးပြုသူသည်ကုမ္ပဏီအုပ်စုတစ်ခုတည်း (ဖက်ဒရယ်သို့မဟုတ်မည်သည့်ဝေါဟာရဖြစ်သည်) ဖြစ်ပါကအချင်းချင်းဆက်သွယ်နိုင်သည်။ Skype ၏သင်္ကေတဆိုသည်မှာသင်၏အဖေသည် Skype ကိုအသုံးပြုနေသည်ဟုဆိုလိုသည်။ အကယ်၍ သင်၏စာများကိုမပေးပို့လျှင်၎င်းသည်သင်၏ကုမ္ပဏီများသည်အုပ်စုတစ်ခုတည်းတွင်မပါ ၀ င်ခြင်းကိုဆိုလိုသည်။
Skype တွင်ဘယ်လို emojis မျိုးကိုသုံးပါသလဲ။
Skype မှာထူးခြားတဲ့ကာတွန်းအသွင်အပြင်ရှိတဲ့ Emoji နဲ့တူတဲ့ရုပ်ပြောင်စီးရီးတွေရှိတယ်။ Skype ၏စိတ်ခံစားမှုအချို့ကို Microsoft Teams တွင်ရရှိနိုင်သည်။ Skype ၏စိတ်ခံစားမှုဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်သည် Windows 10 ရှိ system-wide emoji font အနေဖြင့်အသုံးပြုသောမိခင်ကုမ္ပဏီဖြစ်သောမိုက်ခရိုဆော့နှင့်ကွာခြားသည်။